Statdash: Wụpụta Dashboard Kachasị | Martech Zone
Friday, May 4, 2012 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Ọ dị ka ụbọchị ọ bụla anyị ga-agbakwunye ngwaọrụ ọzọ iji nyochaa ụfọdụ ọnụọgụ ọhụrụ nke na-enye nzaghachi na ndị ahịa anyị. N'ime oge, anyị anakọtara ọtụtụ ndebanye aha SaaS nke anyị na-abanye ma na-apụ kwa ụbọchị. O di otutu na anyi choro ihe mmepe - ma o gha adi onu oke iwekota otutu API ma lekọta ha. Obi dị m ụtọ na onye ọzọ chere na nke ahụ bụ nsogbu dịkwa mkpa Nyochanwere ahịa metrics onye na-ere ahịa.
Statdash nwere atụmatụ ole na ole - ikekwe nke kachasị mma bụ na ọ na-amalite ịdekọ data gị na ngwa ha oge ị gbakwunye metric ịchọrọ ịgbakwunye. Nchịkọta wijetị ị nwere ike ịgbakwunye na-elekọta mmadụ, ọchụchọ, vidiyo, mpaghara, na ọwa ahịa ahịa ndị ọzọ. Ha nwere ike wepu usoro ihe eji eme ihe site na nchịkọta Google, Webmaster Ngwaọrụ, Facebook Insights na Youtube Insights. Ha nwekwara wijetị nke nyochaa akara aha gị na isi okwu gafee Twitter, saịtị akụkọ, na blọọgụ. Nwere ike ịgbakwunye data gị site na ọrụ email gị, CRM gị, ma ọ bụ sistemụ ahịa gị.
Nye ọnụahịa dabere na ọnụọgụ wijetị ị nwere - ngalaba na ndị ọrụ na-abịa na-akparaghị ókè na ikpo okwu. Nwekwara ike ịtọlite ​​ọkwa site na metric na akụkọ ọ bụla na usoro dị mma, nke a na-ebipụta. Gbalịa ya n'efu na wijetị 5… ma ọ bụ kachasị na a $ 99 kwa ọnwa nke gụnyere wijetị 150.
Tags: alertsdashboardỊma Ọkwaigwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụstatdash
Mee 7, 2012 na 12: 45 PM
Nke a dị ka ngwa ọrụ bara uru n'ezie maka ndị ahịa! Daalụ maka ịkekọrịta Douglas.
You ma ndị ahịa ọ bụla na-eji ya / gịnị bụ ahụmịhe ha?
Mee 7, 2012 na 12: 56 PM
Achọghị m, Mary. Agbanyeghị, anyị ga-amalite ịnwale ya na ụlọ ọrụ nke anyị maka ndị ahịa anyị.
Sep 12, 2012 na 6:28 PM
Echere m na anyị ga-enwe ihe dị ka nke a na ọtụtụ puku ndị mmepe na-arụ wijetị maka iGoogle, na ndị ọrụ nwere ike ịgwakọta ma kwekọọ na wijetị ọ bụla ha chọrọ. Ugbu a iGoogle bụ ọnụ. Ọ bụrụ na statdash nwere ike ijere nke a ezigbo UX, ụda kwesịrị ile anya.